Zvinokurudzirwa here kuti vana vaende vasina shangu? | Bezzia
Zvinokurudzirwa here kuti vana vaende vasina shangu?
Maria Jose Roldan | 30/04/2021 22:00 | Mazano amai
Pakagara paine zvinzvimbo zvinopesana maererano nekuti zvakanaka here kuti vana vaende vasina shangu kana zvirinani neshangu. Vabereki vazhinji vanotadzisa vana vavo kufamba vasina shangu kumba mukutya kuti vanozopedzisira vabata dzihwa.
Iyi ingano yechokwadi sezvo hutachiona huchipinda mumuviri kuburikidza nemugwagwa wekufema. Mukupesana, nyanzvi dzenyaya iyi dzinopa zano kuti mwana asashaye shangu kumba nekuti nenzira iyi tsoka dzinokura zvirinani.
1 Vana vanofanira kupfeka shangu here?
2 Ndezvipi zvakanakira kuenda usina shangu kune vana
3 Kuchengeta kana mwana achienda asina shangu
Vana vanofanira kupfeka shangu here?
Nyanzvi dzinopa zano pamusoro pekuisa vacheche pashangu mukati memwedzi yekutanga zera. Kana zvasvika pakuchengetedza tsoka dzemwana wako mudiki kubva pakadzika tembiricha kana kushamisika, ingoisa mamwe masokisi pavari. Rangarira kuti kukambaira kwakakosha kukura kwakanaka kweiyo psychomotor system yemwana, nekudaro havafanirwe kupfeka shangu patsoka dzavo.
Kana mwana angotanga kufamba, vabereki vanofanirwa kusarudza kupfeka mhando yeshangu inochinja uye inofema zvakakwana. Kubva pamakore mana kana mashanu ezera, shangu dzinoshandiswa dzinofanirwa kuomarara uye kusimba kudzivirira tsoka dzemwana.
Ndezvipi zvakanakira kuenda usina shangu kune vana
Kuenda usina shangu usina shangu kuchabvumidza kugadzirwa kuri nani kweiyo rutsoka, kuvadzivirira kubva mukutambura kubva kune izvo zvinozivikanwa semakumbo akatsetseka.
Munguva yekutanga kwehupenyu, eiye mucheche anova nekunzwa kukuru mumakumbo kupfuura mumaokos. Nekufamba usina shangu, tsoka dzako dzinokubatsira iwe kuongorora nyika yakakukomberedza. Uye zvakare, kuenda usina shangu kunobvumira kana kunobatsira mukuvandudzika kuri nani kwenzwi dzese dzediki.
Kana uchifamba usina shangu, mudiki anonzwa mhando dzakasiyana dzemanyatso kuburikidza netsoka dzavo. Izvi zvinobvumira mwana kukudziridza manzwiro akasiyana siyana anonzi kinesthetic, iyo inobatsira kugadzirisa chinzvimbo chemhasuru dzakasiyana nekusimbisa majoini emuviri.
Kuchengeta kana mwana achienda asina shangu
Kuti zvinokurudzirwa kuenda usina shangu, Hazvireve kuti mwana anofanirwa nguva dzese asina chero shangu. Panyaya yekuenda mudziva, zvakakosha kuti mudiki apfeke maslippers, sezvo iri nzvimbo inowanzobatwa hutachiona hwakasiyana.
Muchiitiko chekuti imwe mhando yekukuvara inogona kuitwa uchifamba usina bhutsu, zvakakosha kuti uzive chakakuvara chakonzeresa. Muzviitiko zvakawanda zvinodikanwa kuti utore mushonga wekutetenasi kudzivirira hutachiona kubva pakuwedzera uye kukonzera zvakakomba uye zvakakomba matambudziko.
Vabereki vanofanirwa kuziva nguva dzese mumamiriro ezvinhu mudiki anogona kuenda asina shangu zvachose uye pavanenge vachida kupfeka shangu. Iwe haugone kubvumira mwana kuti agare achienda asina shangu uye kujairira kuenda asina shangu.
Muchidimbu, Vanachiremba nenyanzvi vanoraira kuti vadiki vaende vasina shangu zvachose kwenguva yakati pazuva. Icho chokwadi chekunzwa pasi uye kufamba pairi pasina chero mhando yeshangu, chinovabatsira kuti vave nehukuru hukuru hwepfungwa yavo yepfungwa pakati pezvimwe zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Mazano amai » Zvinokurudzirwa here kuti vana vaende vasina shangu?
Pfungwa dzekushandisa zvakare magirazi egirazi
6 marudzi ematafura emubhedha ekurara yekurara